တရုတ် API 602 ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ | Newsway
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား- အရွယ်အစားများ- NPS 1/2 မှ NPS2 (DN15 မှ DN50) ဖိအားအပိုင်းအခြား- အတန်းအစား 800၊ အတန်း 150 မှ အတန်းအစား 2500 ပစ္စည်းများ- အတုပြုလုပ်ခြင်း (A105၊ A350 LF2၊ A182 F5၊ F11၊ F22၊ A182) F3040 (L), F347, F321, F51), Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy STANDARD ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သည့် API 602၊ASME B16.34၊BS 5352 မျက်နှာချင်းဆိုင် MFG'S End ချိတ်ဆက်မှု - Flange Ends to ASME B16.5 - Socket Weld သည် ASME B16.11 သို့အဆုံးသတ်သည် - Butt Weld သည် ASME B16.25 သို့အဆုံးသတ်သည် - ANSI/ASME B1.20.1 သို့ ဝက်အူလှည့်ပြီး စစ်ဆေးမှုနှင့် စစ်ဆေးခြင်း...
အရွယ်အစားများ- NPS 1/2 မှ NPS2 (DN15 မှ DN50)
Pressure Range: Class 800၊ Class 150 မှ Class 2500
အတုများ (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy
ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ API 602၊ASME B16.34၊BS 5352
မျက်နှာချင်းဆိုင် MFG ၏
ချိတ်ဆက်မှုအဆုံးသတ် - Flange သည် ASME B16.5 သို့ အဆုံးသတ်သည်။
- ANSI/ASME B1.20.1 သို့ ဝက်အူလှည့်ပေးသည်။
1.Forged သံမဏိ၊ အပြင်ဘက် ဝက်အူနှင့် ထမ်းပိုး၊
2.Non-Rising Handwheel၊Integral Backseat၊
3.Reduced Bore သို့မဟုတ် Full Port၊
4.Socket Welded၊Threaded၊ Butt Welded၊Flanged End
5.SW၊ NPT၊ RF သို့မဟုတ် BW
6. Welded Bonnet နှင့် Pressure Sealed Bonnet၊ Bolted Bonnet၊
7. Solid Wedge၊ အသစ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ထိုင်ခုံကွင်းများ၊ Sprial Wound Gasket၊
NSW API 602 globe valve သည် bolt bonnet ၏ အတုပြုလုပ်ထားသော steel gate valve ၏ အဖွင့်နှင့်အပိတ် အစိတ်အပိုင်းသည် gate ဖြစ်သည်။ တံခါး၏ရွေ့လျားမှု ဦးတည်ချက်သည် အရည်၏ ဦးတည်ရာနှင့် ထောင့်မှန်ပါသည်။ အတုပြုလုပ်ထားသော သံမဏိတံခါးပေါက် အဆို့ရှင်သည် အပြည့်အဝ အဖွင့်အပိတ်သာ လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ချိန်ညှိ၍မရပါ။ အတုပြုလုပ်ထားသော သံမဏိတံခါးအဆို့ရှင်၏ တံခါးတွင် အလုံပိတ်မျက်နှာပြင် နှစ်ခုရှိသည်။ အသုံးအများဆုံး mode gate valve ၏ sealing မျက်နှာပြင်နှစ်ခုသည် သပ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး သပ်ထောင့်သည် valve parameters များနှင့် ကွဲပြားသည်။ အတုပြုလုပ်ထားသော စတီးလ်ဂိတ်အဆို့ရှင်များ၏ မောင်းနှင်မှုပုံစံများမှာ- manual၊ pneumatic၊ လျှပ်စစ်၊ gas-liquid linkage တို့ဖြစ်သည်။
တံဆိပ်ခတ်ထားသော စတီးလ်ဂိတ်အဆို့ရှင်၏ မျက်နှာပြင်ကို အလတ်စားဖိအားဖြင့်သာ တံဆိပ်ခတ်ထားနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်ကို အခြားတစ်ဖက်ရှိ အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံဆီသို့ ဖိထားရန် အလတ်စားဖိအားကို အသုံးပြုသည်။ ကိုယ်တိုင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ တံခါးပိတ်အဆို့ရှင်အများစုအား တံဆိပ်ခတ်ရန် ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အဆို့ရှင်ပိတ်သောအခါ၊ အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်ကို သေချာစေရန်အတွက် တံခါးအချပ်ကို ပြင်ပအားဖြင့် အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံကို တွန်းပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
gate valve ၏ gate သည် lift rod gate valve (အဖွင့် rod gate valve ဟုလည်းခေါ်သည်) ဟုခေါ်သော valve stem နှင့် မျဉ်းညီစွာ ရွေ့လျားသည်။ များသောအားဖြင့် lifting rod တွင် trapezoidal thread တစ်ခုရှိသည်။ ရိုတာရီရွေ့လျားမှုအား linear motion အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် အဆို့ရှင်၏ထိပ်နှင့် အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ပေါ်ရှိ လမ်းညွန် groove မှရွေ့လျားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လည်ပတ်လည်ပတ်အားအား လည်ပတ်တွန်းအားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။
အတုပြုလုပ်ထားသော steel gate valve ၏ အားသာချက်များ
2. အဖွင့်အပိတ်အတွက် လိုအပ်သော ပြင်ပအင်အားသည် သေးငယ်သည်။
3. ကြားခံ၏ စီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက်ကို ကန့်သတ်မထားပေ။
4. အပြည့်ဖွင့်သောအခါ၊ အလုပ်လုပ်သောကြားခံဖြင့် အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်၏ တိုက်စားမှုသည် globe valve ၏ထက်သေးငယ်သည်။
5. ပုံသဏ္ဍာန်သည်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး Casting လုပ်ငန်းစဉ်ကောင်းမွန်သည်။
ယခင်- API 602 ဂိတ်အဆို့ရှင်
နောက်တစ်ခု: C95800 ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင် API 602
1 လက်မ Globe Valve
1/2 လက်မ ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင်
2 လက်မ ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင်
3/4 လက်မ ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင်
api 602 a105 ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင်
API 602 အတုပြုလုပ်ထားသော STEEL GLOBE VALVE
api 602 အဆို့ရှင်
butt welded ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင်
API 602 ပစ္စတင်စစ်ဆေးသည့်အဆို့ရှင်
API 602 ဂိတ်အဆို့ရှင်